Wejiga 2-aad ee shirka Khaatumo II oo maanta furmay & midnimada Somaliya oo bud-dhig looga dhigay shirka. – Radio Daljir
Wejiga 2-aad ee shirka Khaatumo II oo maanta furmay & midnimada Somaliya oo bud-dhig looga dhigay shirka.
Janaayo 4, 2012 12:00 b 0
Taleex, Jan 05 – Waxaa maanta ka furmay magaalada Taleex ee gobolka Sool wejjigii 2-aad ee shirka Khaatumo II ee wejigiisii 1-aad uu furmay 26-kii December, 2011.
Furitaanka shirka ayaa waxaa ka hadlay ardaayada martigalinaya shirka, qaar ka mid ah Issimada beesha Dhulbahante, xubno ka mid ah guddiga qabanqaabda shirka, iyo indheergarad kale.
Khudbad: Dr. Cali Khaliif Galaydh.
Dr. Cali Khaliif Galaydh iyo Cali Ciise Cabdi oo hormuud ka ah shirka Khaatumo II ayaa khudbado kooban oo ay ka jeediyeen furtinaanka shirka xusay in midnimada Somaliya ay bud-dhig u tahay shirka Taleex, halka aaya-ka-talinta masiirka beesha, daryeelka bulshada, iyo rabitaanka beeshu ay yihiin ujeedada guud ee shirka.
Garaad Jaamac Garaad Cali oo isna khudbad ka jeediyey furtaanka shirka ayaa sheegay in loo baahan yahay midnimo iyo is-kaashi si horumar loo gaaro.
Khudbad: Garaad Jaamac Garaad Cali.
Madaxa saxaafada ee shirka Adam C/llahi Shuuriye oo u warramay barnaamijka Caawa & Daljir ayaa sheegay in shirku uu meel wanaagsan marayo, jawi wanaagsan ku furmay, ajandaha shirkana la guda-gali doono Sabtida.
Waxaa uu intaas ku daray in ergooyinka shirka oo dhan 150 wakiil oo ka socda qurbaha iyo 60 wakiil oo ka socda wadanka gudihiisu ay gorfayn doonaan ajandaha shirka, gaar ahaan masiirka beesha.
Mar wax laga weydiiyey dawrka Issimada ayaa uu sheegay in Issimadu ay goobjoog ahaayeen, kaalin shariif ahna ay ku leeyihiin geedi-socodka shirka Khaatumo.
Hore ayaa waxaa loogu qabtay London shir kan ka horeeyey ee Khaatumo I oo lagu gorfeeyey masiirka, danta, iyo rabitaanka bulshada SSC; waxaa kaa ka horeeyey shirar lagu qabtay Nairobi & Buurawadal oo lagu dhisay hoggaanka SSC.
Baahin: Salaasa, Jan 03, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Ciidamada dawlada federaalka & kuwa Kenya oo caawa weeraro ku qaaday fariisimo Al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka Gedo; Kenya oo martigalinaysa shir lagu gorfaynayo arrimaha Somaliya; Ilyaan Barre Shiil, la-taliyaha R/wasaare Odinga ayaan ka waraysanay; Is-maandhaafka u dhexeeya baarlamaanka federaalka oo weli taagan; Madoobe Nuunow ayaan waraysanay.